TOP NEWS: Maxaadan ogeyn oo ay ka wada hadleen c/wali gaas iyo wasiirka arimaha dibadda itoobiya? | Kismaayo24 News Agency
Sunday April 23, 2017 - 11:05 under Somali News by Tifaftiraha K24
Madaxweynaha maamulka Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wasiirka arrimaha dibadda dalka Ethiopia Dr. Workneh Gebeyehu ayaa maanta 23 April 2017 kulan ku yeeshay magaalada Bahar Daar ee dalka Ethiopia oo uu ka dhacayo shirka madaxda Africa ee Tana High Level Forum.
Kulankan u dhexeeyey Madaxweynaha Puntland iyo Wasiirka arrimaha dibadda dalka Ethiopia ayaa waxa ay kaga wada hadleen arrimo la xidhiidh ammaanka labada dhinac madaama ay Puntland iyo Ethiopia leeyihiin xuduud dhuleed aad u ballaadhan, Abaaraha baaxaddaleh ee ka jira Soomaaliya Gaar ahaan Puntland, iyo iskaashiga dhanka ganacsiga iyo ammaanka ee labada dhinac.
Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa ugu horayn wasiirka u sheegay in iskaashiga dhanka amaanka maamulka Puntland iyo dalka Ethopia uu heer wanaagsan joogo, hadana markasta ay muhiimtahay inla wadaago xogo ku saabsan arrimaha amaniga iyo hadba wixii soo kordha madaama ay Puntland iyo Ethopia xuduud dhuleed aad u ballaadhan.
Madaxweynaha ayaa waxaa kale oo uu tibaaxay in Puntland ay ku soo hayaameen xoolo dhaqato Soomaaliyeed kuwaas oo ka kala yimi dawladd degaanka Soomaalida Ethiopia, Waqooyiga, Koonfurta iyo Galbeedka Soomaaliya, waxaana uu cadeeyey in dawladda Puntland iyo shacabkeeda oo iskaashanaya ay gargaar bini aadan-tinimo iyo mid walaal tinimoba ay u fidiyeen si hagrasho la’aanana dadkaasi, isla markaana ay ku soo dhoweeyeyn degaanada Puntland.
Dhinaca Kale Madaxweynaha Puntland oo kahadlaya iskaashiga labada dhinac ee dhanka ganacsiga iyo mashaariicaha horumarineed ayaa hoosta ka xariiqay in ay tahay wadiiqo cusub oo wanaajin karta xidhiidhka wanaagsan ee Puntland iyo Ethiopia, waxaana uu sheegay madaxweynuhu in Puntland diyaar u tahay adkaynta iyo wanaajinta xidhiidh kaasi gaamurey.
Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa lagu marti geliyey kulan lagaga hadlayey nabadaynta iyo xasilinta xaalada dalka Koonfurta Suudaan, kulan kaas oo ay kasoo qayb galeen Ra’iisul wasaaraha dalka Ethiopia Hailumarima iyo sidoo kale Madaxweynayaasha dalalka Liberia, Botswana, Burundi, Maser, Malawi, Sudan iyo dalka Nigeria.